Semalt कम्पनी र यसको सेवाहरू
तपाइँसँग एक वेबसाइट छ, र पक्कै पनि तपाइँ तपाइँको साइट प्रमोट गर्न चाहानुहुन्छ, र तपाइँ आश्चर्य गर्नुहुन्छ कि कुन रणनीति लागू गर्ने वा कुन तपाइँको वेबसाइटमा विशेष रूपले अनुकूलित छ? चिन्ता नलिनुहोस्; हामीले तपाईंको लागि सबै योजनाहरू बनाएका छौं।
वास्तवमा कुनै पनि अनलाइन व्यवसाय मालिकको उद्देश्य खोज परिणाम पृष्ठहरूमा उसको साइटको स्थिति सुधार गर्नु हो। वेबसाइटको स्थिति राम्रो मानिन्छ जब यो खोजी परिणामहरूको पहिलो पृष्ठमा दर्जा दिईन्छ। र SEO रणनीतिहरू बिना यो सम्भव हुन सक्दैन।
त्यसोभए, यो कुरालाई ध्यानमा राखेर , Semalt ले सबै वेबसाइटहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो सेवाहरू विकास गर्यो जुन हुन्: SEO (खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन) र वेब विश्लेषकहरू। थपको रूपमा, Semalt ले दुई SEO अभियानहरू प्रस्ताव गर्दछ, जस्तै AutoSEO र FullSEO।
तर ती सबै जानकारी हुनु अघि, हामी तपाईंलाई Semalt के हो बताउँदछौं; के र किन Semalt गर्छ। र Semalt को बारेमा धेरै अन्य चीजहरू। आउनुहोस्!
सेप्टेम्बर २०१ in मा स्थापित, Semalt एक आधुनिक, द्रुत-बृद्धि आईटी कम्पनी हो। यसको मुख्यालय युक्रेनको कीवमा अवस्थित छ। पूर्ण स्ट्याक डिजिटल एजेन्सीको रूपमा, हामी व्यवसायीहरू, वेबमास्टरहरू, विश्लेषकहरू, र मार्केटिंग विशेषज्ञहरूलाई वेब अभियानहरू कुनै पनि प्रकारको व्यवसायको लागि प्रभावकारी ढ use्गले प्रयोग गर्न नयाँ तरिकाहरू प्रदान गर्दछौं।
Semalt रचनात्मक, प्रतिभाशाली, गतिशील, र प्रविधिको विशेषज्ञहरूको टीमबाट बनेको छ जसले जीवनको सफल आईटी प्रोजेक्टहरू ल्याएका छन्। हामी अहिले १० बर्षदेखि आफ्नो सीपलाई परिष्कृत गर्दैछौं र हामी प्रत्येक आफ्नो व्यवसायको एक साँचो मालिक हो भन्ने कुरामा कुनै श .्का बिना पुष्टि गर्न सक्छौं।
हाम्रो संयुक्त प्रयासले एक धेरै नै मौलिक र नवीन वेब सेवाहरू सिर्जना गरेको छ। र हामी आज तपाईलाई प्रस्तुत गर्नमा गर्व गर्दछौं। यस टेक्नोलोजी र हाम्रो मद्दतको लागि धन्यबाद, तपाईं आफ्नो साइटको पूर्ण सम्भावना महसुस गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
धेरै वर्ष काम र विश्लेषण पछि, हामी के गर्नु पर्ने, कहिले र कसरी आवश्यक छ भन्ने बारे पूर्ण ज्ञान छ। हाम्रो लक्ष्य गुगलमा र तपाईंको जीवनमा दुबै नयाँ उचाइमा पुग्न मद्दत गर्नु हो। ग्यारेन्टेड सफलताको लागि हामीसँग काम गर्नुहोस्।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, हामी पूर्ण रूपमा प्रामाणिक छौं र दिन वा रातको कुनै पनि समयमा तपाईंसँग काम गर्न इच्छुक छौं!
अब, तपाइँ Semalt को बारे मा अधिक जानकारी को रूप मा , हामी सेवा को रूपमा प्रदान गर्दछ के को लागी चलौं ।
के र किन Semalt गर्छ।
हामी के गर्ने सक्छौं? हामी तपाईंको व्यवसायलाई अर्को तहमा लैजान्छौं! हामी नयाँ मार्केटिंग च्यानलहरू खोल्दछौं र तपाईंलाई प्रतियोगितामा पराजित गर्न मद्दत गर्दछौं। Semalt ले तपाईंलाई उत्तम सेवाहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको वेबसाइटको उचित सन्दर्भको लागि आवश्यक छ, जस्तै: SEO र विश्लेषकहरू।
तसर्थ, यो ध्यान दिनुपर्दछ कि एसईओ टेक्नोलोजी लक्षित श्रोता र बिक्री बढाउनको लागि सबैभन्दा आर्थिक र प्रभावकारी तरीका हो। त्यसकारण, Semalt तपाईंको साइटको दृश्यता सुधार गर्न र गुगलको शीर्षमा तपाईंको वेबसाइटको स्थिति राख्न प्रतिबद्ध छ । अधिक आगन्तुकहरू - अधिक पैसा! त्यसो भए Semalt लाई यसको मुख्य सेवाहरू मार्फत जान दिनुहोस्।
कसरी खोजी ईन्जिन अनुकूलन प्रक्रिया काम गर्दछ?
जस्तो कि केहि चीज तपाईलाई धेरै पैसा कमाउन सक्छ, SEO जटिल प्रक्रिया हुन सक्छ।
अवश्य पनि, तपाई कुञ्जी शब्दहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ र एसईओ-अप्टिमाइज्ड मेटा ट्यागहरू आफैं फ्रीवेयर उपकरणहरू प्रयोग गरेर सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि पछाडि बस्नुहोस् र जादू हुन प्रतीक्षा गर्नुहोस्। यद्यपि यो उत्तम SEO नतीजामा कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने होइन।
यो गर्ने सबै भन्दा साधारण विधि स्वतन्त्र पेशेवरहरुलाई रोजगार को लागी हो। जहाँसम्म, तपाईं जान्नुहुन्न कि तिनीहरूले तपाईंलाई पूर्ण क्षमताको ग्यारेन्टी दिन सक्छन् कि सक्दैनन्।
एउटा अर्को तरिका, र सायद नयाँ आगमनको लागि राम्रो एक हो, तपाईंको व्यवसायको लागि एसईओ प्रदर्शन गर्न एजेन्सी फेला पार्नु। तिनीहरू आन्तरिक र बाहिरी अनुकूलनको एक राम्रो स्तर प्रदान गर्न सक्दछन्, Google ले वास्तवमा मज्जा लिन्छ।
यस्तो एजेन्सीसँग काम गर्दै, तपाईं वास्तविक एसईओको सबै चरणहरूमा नेतृत्व लिनुहुनेछ:
कीवर्ड (हरू) अनुसन्धान: सबै कुञ्जी शब्दहरू समान बनाइने छैनन्। केहि वास्तव मा तपाइँको वेबसाइट को लागी काम गर्दैन, जबकि अन्य आश्चर्यजनक काम गर्न सक्छ। यही कारणले गर्दा तिनीहरू बुद्धिमानीपूर्वक छनौट गर्नुपर्दछ।
प्राविधिक अप्टिमाइजेसन: यो प्राविधिक चरण कति राम्रो छ तपाईंको साइट खोजी ईन्जिनहरूका लागि "समीक्षा" हुनको लागि तयार छ। यो तपाइँको प्रशंसा जीत को लागी तपाइँको अवसरहरु मा एक सीधा प्रभाव छ।
बाह्य अनुकूलन: बाह्य अनुकूलन वा निर्माण लिंकहरू। यो तपाइँको वेबसाइट को लागी अन्य लिंकहरु को बारे मा छ। प्रायः एसईओको एसईओ रणनीतिको लागि केवल आधारभूत हरूको रूपमा यसलाई सन्दर्भ गर्दछ, र तिनीहरू सही देखिन्छन् (हामी पछि पछि आउनेछौं)।
अनुगमन विकास: आगन्तुकहरूको लागि तपाइँको वेबसाइटलाई सुधार गर्ने कोसिस गरिरहनुहोस्। यदि तिनीहरूलाई यो मनपर्दछ, खोज इन्जिनहरूले पनि त्यस्तै गर्नेछन्।
अब देखि, प्रत्येक अनलाइन व्यापारले अधिक वा कम सीमामा खोजी ईन्जिनहरूको लागि आफ्नै वेबसाइटहरू अनुकूलित गर्नुपर्दछ। यदि हो भने, तिनीहरू आफ्नो आय र उनीहरूको स्थिरता बारे चिन्तित छन्।
एसईओ सबै छ किनकि यो तपाईंको वेबसाईटतर्फ कार्बनिक वेब ट्राफिक ड्राइभ गर्दछ र तपाईंको उपस्थिति अनलाइन मजबुत गर्न "जग सेट गर्दछ" ।
जानकारीको अभावले तपाईंको व्यवसायको स्थिरतामा पुag्याउँछ। सूचित रहनुहोस् र तपाईंको व्यापार नियन्त्रण गर्दछ! प्रत्येक दिन, हामी तपाइँको प्रगति मा उद्देश्य विश्लेषणात्मक डेटा प्रदान गर्दछ।
प्रत्येक दिन, हामी साइटको स्थिति विश्लेषण गर्दछौं र तिनीहरूको प्रगति निगरानी गर्दछौं। वास्तवमा, Semalt तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरु मा जानकारी बटुल्छ, को पाठ्यक्रम मात्र यदि तपाइँ तिनीहरूको साइटहरु को निगरानी गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ।
अन्य साइटहरू जस्तो नभई, हामी तपाईको स्थितिलाई नियमित आधारमा अपडेट गर्दछौं, तपाईंलाई दिनको कुनै पनि समयमा तपाईंको साइटको स्थिति अनलाइन पछ्याउने र भर्खरको परिवर्तनहरू हेर्न अनौंठो अवसर दिदै।
सबै विश्लेषणहरू विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरिन्छ जुन तपाईं आफ्नो साइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सूचित ई-मेल ठेगानामा पठाउन सकिन्छ। यसले तपाईंको प्रगतिको स्पष्ट विचार दिन्छ।
तथ्यको रूपमा, गुगलको शीर्षमा आउन झगडा महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि तपाईको स्थिति सधैंको लागि माथि सँधै राख्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईका प्रतिस्पर्धीहरूले तपाईलाई भोकाएको सिंह जस्तै पछ्याइरहेका छन्। तपाइँलाई यो पासोमा फस्नबाट जोगाउनको लागि, हामीले हाम्रो वेब एनालिटिक्स सेट अप गरेका छौं।
वास्तवमा, हाम्रो वेब एनालिटिक्स वेबमास्टरहरूको लागि व्यावसायिक विश्लेषण सेवा हो जुन बजार अनुगमन गर्न नयाँ अवसरहरूको ढोका खोल्छ, दुबै तपाईंको र प्रतिस्पर्धीको स्थिति र व्यापार एनालिटिक्स डाटा जाँच गर्न।
सूचित हुनुहोस्। अब हाम्रो वेब एनालिटिक्स को उपयोग शुरू गर्नुहोस्!
विश्लेषणले समावेश गर्दछ:
कीवर्ड सुझावहरू: हामी तपाईंलाई सबै भन्दा उपयुक्त वाणिज्यिक कुञ्जी चयन गर्न सहयोग गर्दछौं।
स्थिति ईतिहास: तपाईंको कुञ्जी शव्दहरूको स्थिति समयको साथ हेर्नुहोस् र विश्लेषण गर्नुहोस्।
कीवर्ड स्थितिहरू: खोज इञ्जिन प्रणालीमा तपाईंको साइटको स्थितिहरूको दैनिक अनुगमन।
प्रतिस्पर्धी अन्वेषण: तपाईंको प्रतिस्पर्धीको खोजी ईन्जिन स्थितिहरूको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुहोस्।
तपाईंको ब्रान्डको नियन्त्रण: यो विश्लेषण जानकारी तपाईंलाई लोकप्रिय सहयोग नीति विकास गर्न अनुमति दिदै, तपाईंको लोकप्रियता दर प्रस्तुत गर्दछ।
वेबसाइट विश्लेषक: तपाईंको साइटको विकासको साथ साइट विकास र एसईओ उद्योग आवश्यकताहरूको पूर्ण विश्लेषण।
कुन SEO अभियान Semalt प्रस्ताव गर्दछ?
हामीले भनेको जस्तै, Semalt ले दुई SEO अभियानहरू प्रस्ताव गर्दछ, जस्तै AutoSEO र FullSEO। हामी अब उनीहरूको बारेमा तपाईंलाई बताउँछौं!
वास्तवमा, यो अभियान ती व्यक्तिहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो जसले एसईओसँग परिचित नभए उनीहरूको अनलाइन बिक्री बढाउन चाहान्छन्, र परिणाम प्राप्त नगरी धेरै पैसा खर्च गर्न चाहँदैनन्। त्यसो भए AutoSEO अभियानहरू तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो अभियान हो। किन फेला पार्नुहोस्।
तपाईंलाई AutoSEO किन चाहिन्छ?
AutoSEO अभियानहरू यो पहिले नै धेरै साइटहरूको लागि प्रमाणित भइसकेको छ, त्यसैले तपाईंको साइटको लागि अपवाद नगर्नुहोस्। AutoSEO का परिणामहरू खोज्नुहोस्:
यस अभियानमा सबै समावेश छ, AutoSEO ले समावेश गर्दछ:
सब भन्दा पर्याप्त कुञ्जी शब्दहरूको छनोट
आला साइटहरुमा लिंक निर्माण गर्दै
वेबसाइटहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्
स्थिति अपडेट गर्दै
अब, SEO समय अनुकूलन सुरु गर्ने र AutoSEO को साथ तपाईंको गुगलको स्तर निर्धारण गर्ने समय आयो।
SEO पदोन्नतीको लागि कुञ्जी शब्द चयन
लिंक निर्माण अभियान सुरू गर्नुहोस्
व्यक्तिगत प्रबन्धक समर्थन
कुनै पनि ठाउँमा र भाषामा SEO पदोन्नती
तपाइँको उद्देश्यका लागि प्रावधान योजना छनौट गर्नुहोस्, Semalt सँग १ बर्ष, month महिना, month महिना, र १-महिना सदस्यता छ , किनकि Semalt ले सबै बजेटमा अनुकूलन गर्दछ।
पूर्ण एसईओ , गुगलको शीर्षमा सामेल हुनको लागि एक उन्नत विधि हो। वास्तवमा, यसले तपाईंको साइटको आन्तरिक र बाह्य अनुकूलनमा अपरेसनहरूको एक श्रृंखला समावेश गर्दछ, तपाईंलाई एकदम छोटो समयमा उत्कृष्ट परिणामहरू प्रदान गर्दछ।
गुगलको शीर्षमा पुग्न, तपाईलाई समय र स्रोतहरू चाहिन्छ। यद्यपि, हामीले धेरै उन्नत एसईओ रणनीतिहरू विकास गरेका छौं जुन तपाईंलाई दर्शक वृद्धि गर्न, लि link्क ट्राफिक, र तपाईंको वेबसाइटको बिक्री कम छोटो समयमा पूर्ण एसईओको साथ अनुमति दिनका लागि: अब यो प्रयास गर्नुहोस्!
त्यसोभए, अब कुनै श doubt्का छैन, अब आफ्नै फुलसेओ अभियान सुरू गर्नुहोस् र गुगलको शीर्षमा तपाईंको मार्गमा जानुहोस्!
फुल एसईओ एक पूर्ण र प्रभावकारी अभियान हो जुन तपाईको व्यवसायलाई कम भन्दा कम समयमा बढ्न मद्दत पुर्‍याउँछ तपाइँको वेबसाइटको श्रोताको संख्या थोरै उच्च एसईओको स्तरको साथ बढाउने:
फुलसियोसँग तपाई के पाउनुहुन्छ?
एक उन्नत अनुकूलन
एक लाभदायक लगानी
छिटो र प्रभावकारी दीर्घकालीन परिणामहरू
Semalt सयौं सन्तुष्ट ग्राहकहरु छन्
२०१ 2013 देखि, हाम्रा सबै कार्यहरू हाम्रा ग्राहकहरूको अधिक अनलाइन गतिविधिहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले हो। हामी उनीहरूको सफलताको हिस्सा हुन पाउँदा ठूलो गर्व छौं। यहाँ हाम्रो ग्राहकहरूको अनुहारमा उनीहरूको प्रशंसापत्र मार्फत सन्तुष्टि पत्ता लगाउनुहोस् : +32 भिडियो प्रशंसापत्र, +१66 लिखित प्रशस्तिपत्र, र +२24 केस।
यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्
तपाईं ती सन्तुष्ट ग्राहकहरु मध्ये एक हुन सक्नुहुन्छ
अवश्य पनि, तपाइँ पनि ती सन्तुष्ट ग्राहकहरु मध्ये एक हुन चाहानुहुन्छ, त्यसैले यो सम्भव छ। Semalt गुगलको खोजी ईन्जिनको शीर्ष १० मा तपाईंको वर्तमान स्थितिबाट तपाईंको दर्जामा तपाईंको साथ दिनको लागि तयार छ। यो केस थियो, उदाहरणका लागि, श्री ग्रेटाको साथ, जाओड्रास्लका सीईओ, जसले Semalt को SEO सेवाहरूको साथ बढेको छ। Semalt को साथ उनको अनुभवको बारेमा उनले के भने: "धेरै राम्रो सेवा! म सन्तुष्ट छु, जैविक हिट बढ्दै छ; धेरै कुञ्जी शव्द शीर्ष १० मा छन्। इवान कोनोवालोभ एक महान प्रबन्धक हो, उसले धेरै कडा प्रयत्न गरेको छ, मैले पहिले अरु दुईलाई प्रयास गरेको थिएँ।" उसलाई, र तिनीहरू यति राम्रो थिएनन्। »
थोरै एसईओ अभियान को months महिनामा, हामी प्रगति कायम राख्न र Zaodrasle गुगल TOP-5 र TOP-3 मा एक पैदल प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुराको प्रबन्ध गर्न। परिणामहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
यदि तपाईं यी परिणामहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो साइट भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रा ग्राहकहरूको बारेमा धेरै जानकारी फेला पार्न सक्नुहुनेछ। केसहरू यहाँ फेला पार्न सकिन्छ ।
यो नोट गर्न एकदम महत्त्वपूर्ण छ कि Semalt एक अनुभवी कम्पनी हो जुन १ 120 वर्ष भन्दा बढी SEO अनुभवको साथ १२० भन्दा बढी विशेषज्ञहरूको टोलीसँग छ। त्यसोभए हामी हाम्रा ग्राहकहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन्छौं ताकि तिनीहरू स्वचालित रूपमा तिनीहरूबाट आएको कुनै पनि आवश्यक प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्न। त्यसोभए, हाम्रो वेबसाइटमा तपाइँ कुनै पनि समयमा हाम्रो टोलीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ।
Semalt को साथ कुनै भाषा बाधा छैन
त्यहाँ कुनै भाषा अवरोध छैन, किनकि तपाईं जे भाषा बोल्नुहुन्छ फरक पर्दैन, हाम्रो प्रबन्धकहरूले तपाईंलाई पक्कै पनि साझा भाषा फेला पार्नेछन्। जे भए पनि हामी अंग्रेजी, फ्रेन्च, इटालियन, टर्की, र अन्य धेरै भाषाहरू बोल्दछौं।
Semalt वा टर्बो कथा को बारे मा एक रोचक तथ्य
२०१ 2014 मा हामी नयाँ अफिसमा गइरहेका थियौं र हामीले यसलाई पुरानो फूलको भाँडामा भेट्टायौं। अघिल्लो अफिसको मालिकले उसलाई छोड्यो र लिन अस्वीकार गर्‍यो। यसैले हामीले कछुवालाई आफैंमा छाडिदियौं र उसलाई पछि टर्बो भन्यौं। हामीले कसरी खुवाउने र कछुवाहरूको स्याहार लिने पत्ता लगायौं, र हाम्रो नयाँ अफिसको घरपालुवा जनावर विशाल एक्वैरियममा सरे। त्यसबेलादेखि उनी हाम्रो शुभंकर भए।